Neptune Series Low Frequency Online kupota ari nepepanhau mabikirwo, iyo pamwe chete munyika zvemberi DSP digitaalinen kudzora michina pari, uye IGBT yakakwirira Frequency Pulse Width Kusiyanisa unyanzvi (PWM) .Double-kutendeuka paIndaneti topology magadzirirwo inoita goho kakawanda kupota, izvo kushandiswa Tracking, danho-nokukiya, voltage regulator uye dzinobvisa panze ruzha, kupindira nesimba afoot nokufamba yakachena Sine Wave simba nemushonga, uye kuti nemateru zvikuru nzwisisika uye zvakakwana kudzivirira vanozvishandisa. Pashure Prostar R & D centre elaborative rakagadzirirwa anopfuura 10 yeas, Prostar akaita vakagadzirawo modular chimiro, ane kunopindirana oparesheni iri 5 nguva yakawanda hwakavimbika uye irambe kuita pane dzose Ups, MTBF riri pamusoro maawa 300,000.
Neptune Series Low Frequency Online kupota vakapakata mureza akavaka-goho voga transformers, kunofambira mberi yokunzvenga chinja uye Chinyorwa kuramba chinja, kuita nyaya Ups ane refu chaizvo vanokwanisa kuita pfupi-remudunhu. It raigona kushandiswa yakaipisisa zvakatipoteredza. Uyewo ane akakwana kudzivirira function.Moreover, rune AC chiyamuro, pamusoro-voltage, pasi-voltage, goho pamusoro-voltage, pfupi redunhu dziviriro, inverter, rectifier pamusoro-tembiricha kudzivirirwa, voltage pasi-voltage yambiro, bhatiri pamusoro ndinorova dziviriro uye nezvimwe kuchengetedzwa mune rimwe, nechokwadi maitiro nokushanda stably uye yakavimbika.
Neptune Series Low Frequency Online kupota kunosanganisira 3-danho dzi uye kuroorwa kutotanga kubva HM8K-HM100K, zvinogona kuva kufanana 8 zviyero Ups zvakananga yakafanira uye kutsanya. Usazviomesera neiyi Michina raigona kushandiswa siyana zvinorema uye systems.According zvinodiwa vatengi 'kunobvumirwa, zvinogona kuita N + 1 kana N + X kuvaka, asi maererano siyana zvinodiwa vatengi nedzimwe vachikwanisa, zvinogona kuva kuenderana ne chibhubhubhu 8 zviyero Ups, uye vose mutoro achapiwa akatakura vose 8 zviumbu Ups averagely pamusoro kufanana wandisa kupota hurongwa. Chero Ups of kufanana wandisa hurongwa akanga vakundikana, nemateru vachabatsirana mutoro wayo pakarepo, nechokwadi maitiro kumhanya zvakanaka. Munguva nedanho dzakafanana Ups, haina kuisa hondo uye mumwe standby, asi akasarudzwa makasitoma flexibly. Wokutanga akatendeuka musi Ups iri kwaita kuisa kuti hondo, kana hondo hurongwa akatadza, hondo chitupa pakarepo kune mumwe Ups, nokudaro kuona kuti Magetsi kuti vatengi panguva kushandisa muitiro, izvozvo kuitira kuva wechokwadi uninterruptible simba zvitengeswa.
HM8K ~ HM40K (Three-dzi uye Single panze)
Size (W × DSiez × Aaa)
Weight (KG) (dzakakudzingai bhatiri)
HM60K ~ HM100K (Three-dzi uye Single panze)
Output pa 0 ~ 50% ~ 100% ≤5%, response≤10ms
Kwakachena Sina chinozunguzirwa
Max. ndinorova iyezvino
Mazano pamusoro-voltage, pasi-voltage; goho zadzisa, shortcircuit; Inverter pamusoro-tembiricha; Batteryunder-voltage, pamusoro-voltage
Kureva nguva pakati kukundikana
Dustproof & dampproof, nevamwe inverter transformer, mheni pakaitika Absorção de Água, statics varoyi, Chinyorwa maintainence chinja
Kuchengetedzeka SystemNetwork Data Center
Medium And Large Office kushandisa michina
nemazvo Instrument And Equipment
Previous: 1-20KVA Low Frequency Ups (1: 1) Next:100-400KVA Low Frequency Ups (3: 3)